Maraykanka oo Kordhiyeey Cunaqabbaynta Dhinaca dhaqalaha ee Soomaaliya la saaray – Radio Daljir
Maraykanka oo Kordhiyeey Cunaqabbaynta Dhinaca dhaqalaha ee Soomaaliya la saaray
Abriil 2, 2021 12:51 g 0
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ku dartay muddo sanad ah cunaqabateyn lagu xayiray Dhaqaalaha Soomaaliya, iyadoo labadii Madaxweyne ee ka horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump ay hore tallaabadan oo kale ku dhaqaaqeen.
War kasoo baxay Madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden uu saxiixay warqadda kordhinta Cunaqabateynta Dhaqaalaha Soomaaliya ee loo cuksaday arrimaha dhanka amniga.
“Iyada oo la qadarinayo Xaaladda Soomaaliya, Amniga iyo Siyaasadda waxa ay ku socdaan meel khatar ah, Siyaasadda qaran ee Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu qiimeyay xaaladda aan caadi ahayn” Sidaasi waxaa lagu yiri Warqadda Aqalka Cad kasoo baxday.
“Sababta xaaladda Degdega ah dhalisay ayaa lagu dhawaaqay 12-kii April 2010, waxaana tallaabada la qaaday 20-ka July 2012, waana in aan sii wadnaa xayiraadda laga bilaabo 12-ka April 2021”. ayaa ka mid ahaa ereyadii lagu qoray qoraalka.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ilaalinayo amarka Tirsigiisu yahay 13556 taas oo ka dhigan in uu sii soconayo 12-ka Bilood soo socota oo waxaa qiimeyn lagu sameynayaa sanad kadib sida ay sheegtay Warbaahinta Mareykanka oo si qoto dheer u gashay nuxurka cunaqatabeyntaas
Gorma dib loo bilaabaya Bixinta Baasiboorka Soomaaliya